Soomaalida Ku Nool Dalka Australia oo Banaan Bax Xoogan Ka Hor Dhigay Xarunta Barlamanka Dalkaasi(Hadhwanaagnews) Sunday, October 14, 2012 Sydney-(HWN)- Sida aan ka soo xiiganay idaacada BBC-d qeybteeeda af ingiriiska in Soomaalida ku nool dalka Australia ay banaan bax xoogan ka Sydney-(HWN)- Sida aan ka soo xiganay idaacada BBC-d qeybteeeda af ingiriiska in Soomaalida ku nool dalka Australia ay banaan bax xoogan ka hor dhigeen xarunta barlamanka Australia.
Dadka Soomaalida ah ee banaan baxa dhigayay ayaa la sheegay in ay gaariyeen boqolaal ruux, waxaana ay ka cabanayeen sharciyo adag oo ay Dowladda Ausralia kusoo rogtay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi.
Soomaalida ku nool dalka Australia ayaa lagu war galiyay in dalka aysan meelna uga bixi karin taasi oo ka
dambeysay in ay banaan baxyo xoogan ka dhigaan xarunta barlamanka si go aankaasi dib looga laabto.
Dowlada Australia ayaa dadka Soomaalida ah ee ku nool dalka Australia waxaa ay siisay baasaboor halka qaar kalana ay u diday.
Banaan baxaan ka dhacay xarunta barlamanka dalka Australia oo ay dhigayeen muwaadiniinta Soomaalida ee dalkaasi ku nool ayay ku dalbanayeen in sharciyada adag ee dadka Soomaalida ah lagu soo rogay ay barlamanka wax ka qabtaan.
Si kastaba ha ahaatee banaan baxaan oo ay dhigaan muwaadiniinta Soomaalida ah ee ku nool dalka Australia, walina dowlada kama aysan hadlin baaqyada ka soo baxaya dadkaan Soomaalida ah